Baiboly pejy 17 - Ny Baiboly
Voalohany < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Manaraka Farany
Jenezy toko 29 (tohiny)
6Hoy izy taminy: Tsara ihany va izy? Hoy ny navaliny: Tsara ihany izy ary inty tamy Rasela zanany vavy, mitondra ny ondriny. 7Hoy izy: He! mbola antoandro be ny andro, mbola tsy fotoana famoriana ny biby fiompy, ka ampisotroy ny ondry dia mandehana andraso indray izy. 8Hoy ny navalin'ireo: Tsy azonay atao izany raha tsy efa tafangona ny andiam-biby fiompy rehetra, sy efa voakodia hiala amin'ny vava lavaka fantsakàna ny vato, vao mampisotro ny ondry izahay. 9Mbola niresaka tamin'ireo teo Jakoba, no tonga Rasela nitondra ny ondrin-drainy, fa mpiandry ondry izy. 10Vao hitan'i Jakoba Rasela, zanak'i Labana, anadahin-dreniny, sy ny ondrin'i Labana anadahin-dreniny, dia nanatona izy nanakodia ny vato nanarona ny vava lavaka fantsakàna sy nampisotro ny ondrin'i Labana, anadahin-dreniny; 11ary Jakoba nanoroka an-dRasela, dia nanandratra ny feony ka nitomany. 12Nambaran'i Jakoba an-dRasela fa rahalahin'ny rainy sy zana-dRebekà izy; ka nihazakazaka Rasela nanambara izany tamin-drainy. 13Vao nandre ny filazàny an'i Jakoba zanak'anabaviny Labana dia nihazakazaka nitsena azy, ka namihina azy, nanoroka azy, nitondra azy ho any an-tranony. Dia notantarain'i Jakoba tamin'i Labana izany zavatra rehetra izany,
14ka hoy Labana taminy: Eny, taolako sy nofoko hianao. Ary nitoetra teo aminy iray volana maninjitra Jakoba. 15Ary hoy Labana tamin'i Jakoba: Noho hianao rahalahiko va no tokony hanompoanao ahy maina? Ka lazao ahy izay karamanao? 16Ary nanan-janaka roa vavy Labana; ny zokiny natao hoe Lià, ary ny zandriny natao hoe Rasela. 17Lià dia narary maso, fa Rasela sady tsara bika no tsara tarehy. 18Ary Jakoba tia an-dRasela ka nanao hoe: Hanompo anao fito taona aho, mba hahazoako an-dRasela zanakao vaviaivo. 19Dia hoy Labana: Aleo omena anao izy toy izay omena hafa; ka mitoera àry eto amiko. 20Dia nanompo fito taona Jakoba, mba hahazoany an-dRasela, ary toa andro vitsy foana teo imasony izany, noho ny fitiavany azy.
21Ary hoy Jakoba tamin'i Labana: Omeo ahy ny vadiko fa tapitra ny fetr'androko dia hankaminy aho. 22Dia novorin'i Labana ny olona rehetra tamin'io toerana io, ka nanao fanasana izy. 23Nony hariva ny andro, dia Lià, zanany vavy, no nalainy, nentiny tao amin'i Jakoba, ka niraisan'i Jakoba. 24Ary Zelfa ankizivaviny natolony hanompo an'i Lià zanany vavy.
25Nony tonga ny maraina, indro fa Lià io, ka hoy Jakoba tamin'i Labana: Inona ity nataonao tamiko? Moa tsy ny hahazoako an-dRasela va no nanompoako teto aminao? Nahoana no dia nofitahinao aho? 26Ary hoy no navalin'i Labana: Tsy fanao aty ny mamoaka ny zandriny alohan'ny zokiny. 27Ka tanteraho ny herinandron'ity anankiray ity, fa homenay anao koa ny anankiray noho ny fanompoana izay mbola hataonao aty amiko mandritra ny fito taona hafa. 28Nataon'i Jakoba izany ary notanterahiny ny herinandron'i Lià, dia nomen'i Labana ho vadiny Rasela, zanany vavy. 29Ary Balà ankizivaviny natolony hanompo an-dRasela zanany vavy. 30Ary nankamin'i Rasela koa Jakoba, sady tia azy mihoatra an'i Lià. Ary nanompo tao amin'i Labana fito taona indray izy.
31Hitan'ny Tompo fa nankahalaina Lià, ka nampanana anaka azy izy, fa Rasela kosa momba. 32Dia nanana anaka Lià, ka tera-dahy, nomeny anarana hoe Robena, fa hoy izy: Nitsinjo ny fahoriako Iaveh ka ho tian'ny vadiko aho ankehitriny. 33Nanana anaka indray izy dia tera-dahy, ka nanao hoe: Ren'ny Tompo fa nankahalaina aho, ka nomeny an'ity koa, dia nataony hoe Simeona ny anarany. 34Nanana anaka indray koa izy, dia tera-dahy, ka nanao hoe: Izao vao hiraiki-po amiko tokoa ny vadiko, fa niteraka telo mirahalahy ho azy aho. Izany no nanaovany ny anaran'io hoe: Levì. 35Nanana anaka indray koa izy, dia tera-dahy ka nanao hoe: Ankehitriny hidera an'ny Tompo aho. Izany no nanaovany ny anaran'io hoe Jodà. Dia nitsaha-jaza izy.
14Tamin'ny fotoana fijinjam-barim-bazaha, nivoaka Robena, ka nahita mandragora tany an-tsaha, dia nentiny tany amin'i Lià reniny. Ary hoy Rasela tamin'i Lià: Masìna hianao, mba omeo kely amin'ny mandragoran-janakao aho. 15Fa hoy ny navaliny azy: Tsy ampy ve ny nangalanao ny vadiko, ka haka ny mandragoran-janako koa hianao? Dia hoy Rasela: Aoka àry ho any aminao izy anio alina, ho valin'ny mandragoran-janakao. 16Nony hariva inty tonga avy any an-tsaha Jakoba, ka nivoaka nitsena azy Lià, nanao hoe: Ato amiko no halehanao fa efa nohofako ny mandragoran-janako hianao. Dia nandry taminy izy ny alin'izay. 17Ary nihaino an'i Lià Andriamanitra ka nanana anaka izy, dia nitera-dahy fanindiminy tamin'i Jakoba; 18ka hoy Lià: Nomen'Andriamanitra ny karamako aho tamin'ny nanomezako ny ankizivaviko ho an'ny vadiko. Dia nataony hoe Isakara ny anarany. 19Mbola nanana anaka koa Lià sy nitera-dahy fanineniny tamin'i Jakoba, 20ka nanao hoe: Nomen'Andriamanitra anjara soa aho; amin'izao, dia hitoetra amiko ny vadiko, fa niteraka enina mirahalahy ho azy aho. Dia nataony hoe Zabolòna ny anarany.
Pejy: Voalohany < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 3.3715 seconds